Alahady 12 jolay 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 12 Jolay 2020
Alahady ivom-bokatry ny STK
Alahady faharoa ibanjinana ny lohahevitra “Ambarao ny fahafahana ao amin’ny Tompo”
Ny Litorjia tamin’ny endriny faharoa no nentina nanatontosana ny fanompoam-pivavahana
Fiderana ; mpikambana ao amin’ny Sampana Tanora Kristiana no nitarika ny fotoana
Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitory ny tenin’Andriamanitra
Hiran’ny STK “Fanahy masina” no nentiny nanaomboka ny fotoana anio. Rehefa izany dia niroso tamin’ny Fiarahabana Apostolika ny Mpitandrina ka ny II Koritiana 13,14 no teny nentiny nanolotra izany.
Hijery ny oronan-tsary
Hieno ny toriteny
Novakiana ny Salamo Fiderana tao amin’ny bokin’ny Salamo 66,1-4. Nanaraka izany ny hira tao amin’ny fFhirana Fanampiny 13
Midera sy mankalaza ary misaotra Anao izahay ry Tompo amin’izao alahadin’ny STK izao. Misaotra Anao izahay noho ny soa nataonao taminay sy izao asa masina izao. Fenoy ny Fanahinao Masina izahay . Omeo fifantohana izahay izahay ahafahanay manatanteraka izao fanompoana masina izao. Ho voninahitrao irery ihany anie no isandratra amin’izao fanompoam-pivahana izao. Amen
DIMY MINITRAN’NY SEKOLY ALAHADY:
I zoky Tanteraka RAKOTOARISOA no nanao ny dimy minitra hoan’ny ankizy sy ny tanora anio ka ny I Petera 2,16 no nitondrany ny fizarany.
Nisy ankizivavy iray bikana sy tsara tarehy andevon’olona. Maro mpitsiriritra izy kanefatsy mba namidin’ny Tompony. Nony farany dia namidiny ihany ary nataony lavanty. Nisy nahasahy nividy lafo dia lafo izy tamin’izany. Natahotra ity tovovavy ity sao dia ho ampiasain’ny tompony vaovao sy hanaranany fo ho setrin ‘ny nividianany azy lafo. Sy izany anefa no nitranga fa raha vao tonga tany an-tranony izy dia nohafahany ary navelany nandeha. Nandeha ilay ankizivavy ary rehefa lasa lavidavitra izy dia niverina hanompo maimaim-poana ilay nividy azy noho ny fahatsapany ny fitiavan’ilay nanafaka azy. Isika ankizy sy tanora ihany koa dia efa nohafahan’i Jesoa tamin’ny fanandevozan’ny fahotana. Ho setrin’ny fitiavan’ny Tompontsika antsika dia andeha isika hanantona Azy sy hanompo Azy amin’ny fampandrosoana ny asany.
Jesoa Kristy o, mbola misaotra Anao isahay fa mbola nampandrenesinao ny teninao sy nampahafantarinao ny sitraponao. Omeo ny Fanahy Masinao izahay itoetra aty anatinay hampianatra anay ampatsiahy anay fa ny fahafahanay izay ao aminao dia entinai ihany koa anompoana sy anomezana voninahitra Anao ary anaovanay mandrakariva izay sitrakao mba ampandrosoana ny fiangonanao. Dia mitomoera mandrakariva aty anatinay ianao ry Tomponay. Amen
Ny hira FFPM 244,2 no notanterahina mialoha ny famakiana ny tenin’Andriamanitra, ary nisy ny vavaka mialoha izany : « Ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy masina ô, mbola tsy mitsahatra misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izahay noho ny amin’ity fotoana ity izahay izay ahafahanay indray mihaino sy mandray ny teninao. Koa ankehitriny Tompo ô, mangataka ny fitarihan’ny Fanahy masinao izahay ho an’izay hamaky ny Teny sy izay hitondra ny hafatrao mba ho izay tena tianao ambara Tompo no ho tenenin’izy ireo aoka ny sitra-ponao irery ihany no ho voalazan’ny vavany. Dia mitenena Jesoa ô fa vonon-kihaino Anao ny mpanomponao » Amen.
Ireto ny teny novakiana izay mifanaraka amin’ny perikopa dia ny : Jeremia 31, 10-14 / Lioka 7,18- 23 / Galatiana 5,2-6 Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 226,1
Raha ny valan’aretina Covid 19 no jerena dia mampihorohoro, mampatahotra ary mampihoro-koditra ny fanarahana ny vaovao mahakasika azy. Amin’izao fotoana izao dia eo amin’ny zato ka hatramin’ny telonjato isan’andro ny olona voany ary efa mananika ny telopolo mahery ny olona lavony. Manoloana izany dia “Ambarao ny fahafahana ao amin’ny Tompo”. Fotoana izao iainana izany lohahevitra izany. Ilaina izany fanambarana ny fahafahna ao amin’ny Tompo mba: Anaporofoana ny asan’ny Tompo Ampaherezana ny hafa mbola malemy Ampahafantarana ny Tompo ireo tsy mahalala Azy sy ny asa mahagaga nataony.
1 Fampaporofoana ny asan’ny Tompo:
Ao amin’ny Jeremia 31,10-14 dia miasa ny Tompo manavotra sy manafaka ny olony izay teo ambany vahoan’ireo mahery noho izy.
Ity jeremia toko faha 31 ity ihany koa dia mampatsiahy ny zanak’Israely fa fitiavana mandrakizay no nitiavan’Andriamanitra azy izany no nampaharetany ny famindram-pony tamin’izy ireo.
Eo amin’ny andininy faha 11 dia manambara ny fanavotany ireo olony izay eo am-pela-tanan’izay mahery noho izy Andriamanitra. Rehefa tanteraka izany fanavotana izany dia afaka nihoby an’Andriamanitra ny vahoakan’Israely izany fihobiana izany dia fanaporofoana ny asan’Andriamanitra teo amin’ny fiainan’ireto zanak’Israely ireto tamin’ny fanavotany sy fanafahany azy ireo teo am-pelatanan’ny fahavalony.
izany fihobiana izany dia narahin’ny fifaliana sy fandihizana Naseho tamin’ny fihetsika ny asan’Andriamanitra.
Nasehon’ny zanak’Israely tamin’ny fihobiana sy fandihizana ny fanafahana nataon’Andriamanitra taminy. Ny fanambarana ny asan’Andriamanitra dia fanaporofoana fa miasa eo amin’ny fiainantsika Andriamanitra.
2 Fampaherezana ny hafa mbola malemy
Misy olona izay tsy mahalala , tsy mahatsapa, tsy mino tsy te hahalala ny amin’ny fiasan’ny Tompo. Ao amin’ny Galatiana 5,2-6 dia gaga Paolynahita ireto Galatiana efa nandray ny Filazantsara kanefa mbola miverina indray amin’ny fanatanterahana sy fiankinana amin’ny lalàna ho entina manamarina ny tena eo amin’izay atao. Somary nalahelo Paoly satria toa misasatra ihany izy kanefa ireto Galatiana ireto dia nanadino ny fampianaran’I kristy. Tamin’izany dia nisy ireo nilaza fa tsy ho Kristiana mihitsy ny olona raha tsy mitandrina ny lalàna ary mila mitandrina ny Sabata sy foràna. Noho izany fahalemen’ny Galatiana izany dia hoy Paoly: Mila amporisihina ny Galatiana tsy hiverin-dalana amin’ny fanamarinana arak any lalàna fa very maina ny finoana raha hiverina amin’ny fitandremana ny lalàna ny Galatiana. Fahamarinana amin’ny Finoana izay avy amin’ny Fanahy Masina mitoetra ao anatintsika no amonjena antsika. Ny Fanahy Masina no mitarika antsika ahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra fa tsy ny nofontsika. Mila fampaherezana hihazona ny finoana ny Galatiana ka hamela ny Fanahy Masina hiasa ao anatiny. Izany no ahafahany miaina ny fanantenana ny fahamarinana izay finoana miasa ao anaty amin’ny fitiavana araka an’i Kristy. Ho an’ny Galatiana dia ny filazana ny fanafahana ao amin’ny Tompo dia fampaherezana azy indray. Ahafahany mijoro mandao ny fiainany taloha ka hitoetra amin’ny fiainana vaovao ao amin’i Kristy.
3 Fampahafantarana izay tsy mbola mahalala: Lioka 7, 18-23
Naniraka ny mpianany Jaona hanontany an’i Kristy hoe “Ianao ve no ilay Mesia sa mbola hafa no andrasanay?” Tamin’izany fotoana izany Jesoa dia nanao asa fanasitranana maro. Izany asa fanasitranana nataony izany no valin’ny fanontanian’ireto mpianatr’i Jaona ireto ary nasain’i Jesoa notanterin’ireto mpianatra ireto tany amin’i Jaona ny asa mahagaga izay hitany. Ny zavatra hitan’ireto mpianatr’i Jaona ireto dia ny fahiratan’ny jamba, fahafahan’ny mandringa, fahadiovan’ny boka, fahaladian’ny marenina, ny fananganana ny maty, ny fitoriana ny filazantsara amin’ny malahelo ary ny fahasambaran’izay tsy ho tafintohina noho ny zavatra tanterahin’ny Tompo. Sambatra izay tsy ho tafintohina amin’ny asan’I Kristy satria ho avy ny andro izay hanafintohana ireo mpitondra fivavahana noho ny asan’i Kristy ka hitarika azy ireo any amin’ny fanombohana an’i Jesoa amin’ny hazo fijaliana. Ireo zavatra telo lehibe ireo no fanambarana ny fanafahana ao amin’ny Tompo. Ho anareo izay ao anatin’ny tsy fahasalamana, ho anareo izao tenin’Andriamanitra izao. Ny tenin’Andriamanitra dia mitory aminao ny fanafahana. Ao amin’ny Tompo no misy ny fanafahana anao. Rehefa azonao izany fanafahana izany dia ambarao tahaka ny nataon’ny zanak’Israely afaka tamin’ny fahababoana, ambarao tahaka ny nataon’i Jesoa Kristy fa tanteraka ny asam-pamonjena sy fanafahana ho an’ny olona rehetra. Rehefa nahazo fahafahana ianao dia aza miverin’dalana intsony fa mijoroa ka ambarao amin’ny fahasahiana izany fahafahanao izany. Ianao izay salama tsara aza mieritreritra fa ny fitandremanao sy fahaizanao miaina no mahasalama anao; Olombelona ihany ianao ,mety hanjo anao ihany izany tsy fahasalamana izany; Izao no izy angatao amin’ny Tompo mba ho ao aminao mandrakariva izany fahasalamana izany. Manoloana izao areti-mandoza izao dia mitoera tsara ao amin’ny Tompo, ambarao ny fahafahanao satria ny Tompo no momba anao, ny Tompo no miaraka aminao, ny Tompo no maha-toa izao anao, Ny fahasoavan’I Jesoa Kristy no mitahiry anao hatanjaka tsara. Raha misy fahalemena eo aminao na ara-nofo na ara-panahy dia ao amin’i Kristy no fanafahana anao ary rehefa afaka ianao . Rehefa mitoetra ao amin’i kristy ianao dia omeny fahafahana ary rehefa azonao ny fahafahana dia ambarao ataovy tanteraka aminao ny Fampaporofoana ny asan’ny Tompo, ny 2 Fampaherezana ny hafa mbola malemy, ny Fampahafantarana izay tsy mbola mahalala. Ho antsika rehetra, araraoty ny tombon’andro atolotry ny Tompo ho anao, Raiso izany ho tombon’androm-pahasoavana ho anao. Ampiasao anambarana ny fanafahana ao amin’ny Tompo ny tombon’andronao. Alahadin’ny STK isika izao ho anao tanora ity perikopa ity. Ilaina ianao anaporofo eo amin’ny fiainanao fa nomen’ny Tompo fahafahana ianao ka miaina izany fahafahana izany. Asehoy amin’ny fanatanterahanao ny asan’Andriamanitra sy ny fijoroanao vavolombelona ny fahafahanao. Izany ataonao izany dia fampaherezanao ny tanora sahala aminao eny na dia ireo ray aman-dreny aza. Mitaiza anao hanana fitondran-tena Kristiana ny Sampana Tanora Kristiana amporisio ireo namanao hiditra amin’izany sampan mitaiza tanora arak any sitrapon’Andriamanitra izany. Jaona Apostoly dia tao amin’ny fahatanorany no nantsoin’ny Tompo izany no niantsoana azy hoe Apostolin’ny fitiavana satria sady tian’ny Tompo izy no nitory ny fitiavana avy amin’ny niarahany tamin’ny Tompo. Ry tanora ô, na anaty na ivelan’ny Sampana dia tohany ny STK fa fanaporofoana io fa olona nandray fahasoavana avy amin’ny Tompo ianao ka ny asan’ny Tompo no hita ao anatinao. Ahafahana manao zavatra lehibe ny fahatanorana satria feno hery ny tanora, feno fahalalana, manana fotoana, araraoty izany fahafahanao manao zavatra izany mba hanaovanao zavatra ho an’Andriamanitra. Ento anambarana ny fahafahanao ao amin’ny Tompo ny fiainanao manontolo. Raha ambaranao ny fahafahanao ao amin’ny Tompo dia omen’ny Tompo anao izay rehetra angatahinao amin’ny Anarany satria tsy foana tsy akory izay fikelezanao aina ao amin’ny Tompo. Ny fanambaranao ny fanafahana ao amin’ny Tompo dia sady fampaherezanao ny hafa no fampahafantaranao sy fitaomanao izay mbola tsy ao amin’ny Tompo mba hanana izany fahafahana avy amin’ny Tompo mba ho ao amin’ny Tompo izy. Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra Amen.
Andriamanitra o, Rainay amin’ny alalan’I Jesoa Krsty Ianao. Isaoranay ny Anaranao noho ny fampahafantaranao anay ny sitraponao. Tafio hery izahay ahafahanay manambara ny fahafahana ao aminao Kristy sy ilay fahafahana avy aminao ho porofo fa efa nandray ny asanao teo amin’ny fiainanay izahay sy mba ho fampaherezana ny namanay izay mbola tao anatin’ny fahalemena sy tafaverina tao anatin’ny fahalemena indray mba ho afaka ao amin’izany izy ka hiha mahery lalandava ary ijoro mandrakariva ampiasa ny tombon’androny ho tombon’androm-pahasoavana izarana fitiavana ho an’ny namana sy ny Havana ary ampahalala ny aminao Jesoa Kristy ilay Andriamanitra manafaka ka ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra ahatanteraka izany eo amin’ny fiainany. Tomp ô, mivavaka aminao izahay ho amin’ireo asan’ny fiangonanao, ho an’ireo mpitondra fiangonana, ho an’ireo mpitory Filazantsara, ho an’ireo toby masina rehetra izay ikarakarana ireny mpanomponao izay tratran’ny aretina izay gejain’ny fanahy ratsy ireny. Mpamonjy ô, mino izahay ary manantena fa ijery sy omba azy ireny Ianao ka ho lavorary ny asa ho voninahitrao Kristy ary ho fanambarana ny fahafahana avy Aminao ry Tompo. Entinay am-bavaka ry Tompo ity fitandremana misy anay ity sy ny Kristiana eto, ny sahan’ny FJKM Ny birao, komity, mpikambana STK, ny tanora tsy ao amin’ny STK, nyRay aman-dreny sy ny mpanohana dia apetrakay eo am-pelatananao. Mivavaka ho an’izany Sampana izany izahay amin’izao ivom-bokany izao ahafahany manatonosa tsar any adidy aman’andraikiny ary ny raharaha rehetra entina mampandroso ny asanao eo amin’ny sehatry ny tanora. Itanao ny zava-misy ankehitriny apetrakay eo am-pelatananao Tompo ny fahafahan’ireo Kristiana manohana ity sampan ity. Ampaherezo izahay Tompo hanohana ity Sampana ity na dia misedra olana aza izahay. Mivavaka aminao izahay ho an’ny zanaky ny fiangonana. Jereo sy tsinjovy izy ireo ry Tompo mba hahajoro mandrakariva ho afaka manambara ny fahafahana ao aminao. Mivavaka aminao izahay Tompo ô manoloana ity aretina izay mianjady aminay ity. Mangataka ny fiarovana avy aminao izahay. Ianao no anasitrana, hanala ny rofy ary handevona izany aretin-dratsy izany mba tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana intsony, tsy handripaka olona na hanenika amin’ity Nosindrazanay ity indrindra ny faritra Analamanga izay misy anay Ianao Tompo ô no irinay hiasa eo anatrehan’izany satria maro no voan’izany eto amin’ity faritra misy anay ity. Mivavaka aminao izahay Tompo ô ho an’ity Firenena misy anay ity. manomboka any amin’ny mpitondra ka hatrany amin’ny vahoaka entina rehetra; homba azy ireo Ianao, ijery azy ireo Ianao ka mba hifampitsinjo ho olona hahay mifanaja Ianao anie hiasa ao anatin’ny fijerena vaha-olana amin’ity aretina ity mba ho tanteraka ny zava-kendrena rehetra. Mivavaka aminao izahay ho an’ny mpitsabo sy ny fitaovana ary ny fanafody izay ampiasainy. Entinay am-bavaka ny Miaramila izay hampandry fahalemana izao fiaraha-monina misy anay izao mba ahavitany tsara am-pahamarinana ny asany. Entinay am-bavaka aminao ireo mpianatra indrindra ireo mpanala fanadinana. Mivavaka aminao izahay ho an’ny asa, ny orinasa ny mpiasa. Jesoa malala ô, fantatrao fa misy orinasa efa madiva hikatona, misy efa nikatona, maro ny very asa . Tompo ô, apetrakay eo am-pelatananao ireny. Fantatrao fa tsy maintsy mihinana izahay isan’andro ary dia apetrakay eo am-pelatananao ny fiainan’ireny olonao ireny sy ny asany ary Ianao no hijery sy hitsinjo ny isam-batan’olona, isa-tokatrano ary Ianao Tompo ô hitahy azy ireo ka ahatongaazy hanana fahafahana hiatrika ny fiainana eo anoloany. Entinay am-bavaka ireo sahirana, trotronay ho eo am-pela-tananao ny marary, ary ankininay eo ambany fahasoavanao ny mana-manjoa. Tompo ô, Hahita vahaolana izy ireo, ary ho sitrana amin’ny aretina, hahay hionona sy hahery noho ny fampiononanao Kristy Mpamonjy sy ny fandresenao ny fahafatesana.Mivavaka aminao izahay ho an’ireo izay mangata-bavaka, izay maniry ho entina am-bavaka ary ireo manana hataka manokana. Entinay am-bavaka aminao izay tsy voatonon’ny vavanay kanefa mahasoa anay. Izany vavaka izany dia ampiarahinay amin’ilay vavaka nampianarin’ny Tompo manao hoe “Rainay izay any an’danitra…” Amena
Fanekem-pinoana laharana voalohany no natao,
Nanatanteraka Hira iray ny Sampana Taninketsa: “Mandehana ka torio Jesoa”, rehefa vita izany dia notononina ny Tondrozotra 2020 ary notanterahan’ny Mpitandrina ny Tso-drano. Rehefa vita izany dia natao ny hira famaranana ao amin’ny Fihirana Fanampiny 52 ary nitohy tamin’ny Vavaka Mangina
Nitarika ny fotoana : Fiderana Andrianarivo
Dimy minitran’ny sekoly Alahady : Tanteraka RAKOTOARISOA
Namaky ny tenin’ndriamanitra : Sitraka Andrianarivo
Nitory ny teny : Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina
Nanao ny tatitra : Toky ZANAHARITSIMBA
Nanao ny oronantsary sy ny sary : Jonathan RABEMANANORO, Rova HARENTSOA